Intambo intle kumkhondo wenqanawa yakho kwi-Hypnotic Break Liner | I-Androidsis
Tsibela ngqo kwiLinen yokuqhekeka yokuLala kwiMidlalo yeKetchapp
Xa umntu ehlala edlala umdlalo egxile ngokupheleleyo kwiscreen kwaye, ngequbuliso, yonke into ejikelezileyo ifiphele ngasemva, loo mdlalo wevidiyo ukwazile ukubetha isitshixo esifanelekileyo ngandlela thile. Nokuba kukwimizobo, kumatshini womdlalo okanye kuseto lweenkcukacha, loo maxesha asenza sonwabe aphantse ahlukile. Kukho imidlalo embalwa kule minyaka ingamashumi idlulileyo ethe yasifaka kumava abo ukuze singene kuyo kwaye yiyo loo nto sihlala sikhangela izihloko ezitsha ezisizisela into entsha kwinto ebonakala ngathi yonke into iyiliwe.
Kodwa akufani noku, kuba kukho izihloko ezinje ngeLiner Break, ezikhoyo Unako ukusiqhelanisa ukuthathela ingqalelo loo migca inemibala ngemibala emithathu eyahlukileyo ukuze inqanawa yethu iwele ngqo kwaye iqhubeke nohambo oluya phezulu kwinto esihlala siyibiza ngokuba yimbaleki engapheliyo. Umdlalo omtsha opapashwe yiMidlalo yeKetchapp kule veki ungashwankathela indlela onokuba ngayo ukuze uzobe ngengqondo umkhondo wenqanawa ekufuneka iwele loo mgca ukuze iqhubeke nokufumana amanqaku. Umoya omkhulu owenziwe kulo mdlalo wevidiyo kwaye uncedwe kakhulu ngulo mculo ukwaziyo ukukhulisa uxinzelelo kunye nevolumu ngamaxesha athile.
1 Umnqweno ngelixa udlala umdlalo
2 Ukunceda i-rocket kwi-Art Deco
3 Umgangatho wobugcisa
Umnqweno ngelixa udlala umdlalo
Ayikuko ukuba sifuna ukuba kude nenyani ngalo lonke ixesha xa sikhangela imidlalo esisilisela ngomnwe, kuba ukuba bekunjalo, loo nto iyinyani ebonakala phezulu ngohlobo lweHTC Vive, ngokuqinisekileyo kungangcono ukuba khange sizame nokuzama, kuba sinokuphulukana nengqondo xa sidibana nezinto ezimbini ezahlukileyo xa sinxiba okanye sikhulula "iiglasi" zale mveliso intle iyilwe yiValve ngokubambisana nenkampani yaseTaiwan.
Break Liner ifezekisa into efanayo, kodwa ngaphandle kwesidingo sokuba usebenzise inyani elungileyo, kwaye kuphela ngokulula komdlalo, Ubuncinci be-Art Deco jonga kunye nomculo obandakanyekayo onyukayo ngexesha lokubonisa awona maxesha abalulekileyo omdlalo. Oku yeyona nto intle kulo mdlalo opapashwe yiMidlalo yeKetchapp ejoyina abanye abaninzi kolu phando lusandula ukuthengwa yenye yeerat: Ubisoft.
Ukunceda i-rocket kwi-Art Deco
Uhlobo lohlobo olusetyenzisiweyo kulo mdlalo wevidiyo, kunye ubume obugobileyo baloo nqanawa Oko kubonakala kunokuba kuthathwe engqondweni kaJules Verne, kumnika umda ofanelekileyo wokwenza umdlalo wevidiyo osemgangathweni ophezulu kunye nezimvo ezingaqhelekanga.
Kuya kufuneka ucinezele ngexesha elifanelekileyo ukuze umzila ovela kwelinye icala lomkhombe uye kwelinye ukwenze kube lula ngawo nqumla umgca osembindini enemibala emithathu epeyintiweyo: mhlophe, mnyama, bomvu. UMhlophe nguye oza kuwela, omnyama ludonga olungenakoyiswa olungasibhubhisi, kodwa ukuba siyibethile, iyakuguqula ibe bomvu, ngalo mzuzu singqubana nayo, iya kuba sisiphelo somdlalo.
Sinokufumana amanqaku ngakumbi njengoko sijikeleza ngenqanawa ngokusebenzisa loo migca imhlophe ukuze ufumane, kwimidlalo elandelayo, ezinye iindidi zeenqanawa ezongeza umxholo kumdlalo wevidiyo oya kukuqhatha.
Unayo simahla ukusuka kwiVenkile yokuDlala kuGoogle, kunye nee-micropayments ezicacileyo ezingaswelekanga apha kulo msitho.
Break Liner isebenzisa impumelelo kunye ubugcisa obubonakalayo, isandi esimnandi esidibanisa umoya omnandi kumdlalo ngamnye, kunye nobuchwephesha bokudlala umdlalo obuhle. Umdlalo wevidiyo owenziwe kakuhle.
Isimbo sakhe sokubonakalayo kwiArt Deco
Ukuba kufuneka sibuyele kwinyani
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Imidlalo ye-Android » Tsibela ngqo kwiLinen yokuqhekeka yokuLala kwiMidlalo yeKetchapp
Izitikha zezinto ezingaqhelekanga, ngoku ziyafumaneka kuGoogle Allo
Olu lujongano lweLe Pro 3 entsha evela kwiLeEco kuhlobo lwayo lwase-USA